FAMONJENA LANONAM-PANAMBADIANA : Fianakaviana maromaro tratry ny fanapoizinana ara-tsakafo
Araka ny loharanom-baovao, voaray ny sabotsy hariva lasa teo dia fianakaviana maromaro no tratry ny fanapoizinana ara-tsakafo tany Nosivola, kaominina Ankazondandy Distrikan’i Manjakandriana, tamin’ny famonjena lanonam-panambadiana. 15 avril 2019
Niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera “facebook” ny zava-niseho nandritra ny faran’ny herinandro lasa teo. Raha ny fanazavana hatrany dia "Mayonnaise" efa vita anaty boaty teny an-tsena no nafangaro tamin’ny vita tanana tao an-trano. Io no ahiahy nipetraka satria dia nisy ny filazana fa ny fianakaviana ihany no nandray an-tanana ny fanamboarana ny sakafo fa tsy naka mpikarakara.
Vokatr’izay dia marobe ireo olona narary tsy maintsy naiditra hopitaly, ny sasany tao amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, ny sasany kosa nalefa teny amin’ny Hopitaly Befelatanana. Arahina akaiky ny tohin’ny raharaha sy ny fizotry ny fivoaran’ny fahasalaman’ireto tra-doza ireto.
Telo mianadahy efa nahazo 160 tapitrisa Ariary nadoboka am-ponja vonjimaika FISOLOKIANA (123) 18 juin 2019 Niakatra Fitsarana ireo zandary telo voarohirohy KOLIKOLY TENY AMIN’NY LALAM-PIRENENA RN4 (106) 17 juin 2019 Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD VOKATRA VONJIMAIKA FENO NAVOAKAN’NY CENI (87) 18 juin 2019 Depiote teo aloha miisa 50 no ho tafaverina raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana ANTEMIERAM-PIRENENA (85) 18 juin 2019 Tratra ny mpamily kamiao nitondra entana halatra milanja 8 taonina ASAN-JIOLAHY TOAMASINA (84) 18 juin 2019 Natontongan’ny IRD ny TIM tao Vakinankaratra FIFIDIANANA DEPIOTE ANTSIRABE II (82) 18 juin 2019